Dassault Falcon maka P3V4. Altimeter adịghị arụ ọrụ.
ajụjụ Dassault Falcon maka P3V4. Altimeter adịghị arụ ọrụ.
1 afọ 3 ọnwa gara aga #758 by spilok
Ahụrụ m Falcon maka Prepar3dv4. Ihe niile na-arụ ọrụ MAGHỊ elu elu. Enwere ndozi maka nke a?
1 afọ 3 ọnwa gara aga #765 by superskullmaster
Ị ga-enwe obere ndidi na nsogbu P3D V4. Enwere ezigbo ohere ọ ga - eme ka ọ bụrụ eziokwu, n'ihi ya, m ga - anwa iji dochie nlele na nhazi panel na otu site n'ụgbọelu nke na - arụ ọrụ (na - eche na ọ bụ otu nha).
1 afọ 3 ọnwa gara aga #766 by spilok
Ihe niile na-arụ ọrụ ugbu a mgbe a rụghachịrị. Eche m na m na-eji ihe na-eme nchọpụta mere ka m nwee ihe ole na ole. Nweghachi ihe ọ bụla nwere ihe niile edoziri, gụnyere altimeter.
Oge ike page: 1.521 sekọnd